Ikholeji yaseSpelman: Izikolo ze-SAT, iindleko kunye neData ye-Admissions
Uvavanyo lweeKholeji zeeKholeji zeSpelman:
Abafundi abanomdla wokufaka isicelo kwiSpelman kufuneka baqaphele ukuba isikolo sinomlinganiselo wokwamkela u-36%. Oku kuthetha ukuba isikolo sikhetha ngokufanelekileyo. Ukufaka isicelo, abafundi abaza kufuna ukuthumela isicelo esipheleleyo-iSpelman iyamkela isicelo esisisigxina (ngaphezulu kule ilapha ngezantsi). Izinto ezongezelelweyo zibandakanya amanqaku avela kwi-SAT okanye UMTHETHO, kunye neempendulo eziphakamileyo zezikolo.
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, okanye ukuba unemibuzo, zikhululeke ukudibanisa i-ofisi yokungena, okanye u tyelele iwebhusayithi ye-Spelman.
I-Spelman I-Acceptance Rate: 36%
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umdwebo we-Spelman
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 500/590
ISAT Math: 480/580
Itheleji yaseGeorgia ye-Top SAT
UMTHETHO UMathe: 21/26
Umlinganiselo ophezulu weKholeji yase-Georgia
I-Spelman College Inkcazo:
Ikholeji yaseSpelman, ikholeji yamnyama yabomkani, ikhona imizuzu embalwa ukusuka kwidolophu yase-Atlanta. Indawo yayo yedolophini ivumela ukuba yabelane ngezixhobo kunye ne-Atlanta University Centre, iqumrhu leekholeji zeNkcubeko eziMnyama ezibandakanya iYunivesithi yaseClawk Atlanta , i-Interdenominational Theological Centre, i- Morehouse College kunye ne-Morehouse School of Medicine.
I-Spelman inomdla ogqithiseleyo wobugcisa be-liberal, kwaye isikolo sihamba kakuhle kwizinga lezikolo eziphambili kuma-Afrika aseMelika kunye nezikolo eziphambili zokuhamba kwezentlalo. Ireyithi ye-11 ukuya kweyoku-1 yomfundi / i-faculty ratio kuthetha ukuba abagqwesileyo bafumana ingqwalasela yabantu.
Ubhaliso lwabonke: 2,125 (zonke iidanga lokugqibela)
Isifundo kunye neMali: i-$ 27,314
Iincwadi: $ 2,000 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi : $ 12,795
Ezinye iindleko: $ 4,300
Iindleko ezipheleleyo: $ 46,409
I-Spelman College Financial Aid (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 12,488
Imali: $ 8,054
I-Popular Majors: I- Biology, i-Economics, i-Education, isiNgesi, i-Interdisciplinary Studies, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala ( abafundi bexesha elipheleleyo ): 91%
Ireyithi yokudlulisa: 13%
Ireyithi ye-Graduation of Year 6: 77%
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Tennis, iVolleyball, i-Softball, iNgcahla, iGalofu, ilizwe eliphambeneyo, iBhola lebhola
Ukuba Uthanda Ikholeji yaseSpelman, Unokuthi uthanda ezi zikolo:
IYunivesithi yakwaEmory: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
IYunivesithi yaseTuskegee: iProfayili
Spelman kunye neSicelo esiQheleleyo
Ikholeji yaseSpelman isebenzisa isicelo esiqhelekileyo . La manqaku angakunceda ukukukhokela:
IYunivesithi yaseAowa Admissions
I-American International College Admissions
'Bonjour Mémère': Indlela yokujongana nogogo wakho ngesiFrentshi
I-Fairfield University Admissions
Ishicilelo sokungalingani kweChebyshev
ImiSebenzi yoLwazi lweNxibelelwano
I-Biography kunye neProfayili kaNick Diaz
Konke malunga neJellyfish